Warfaafinnada DKMG ah iyo Alshabaab oo guulo ka kala sheegtay dagalaada Muqdisho. – SBC
Warfaafinnada DKMG ah iyo Alshabaab oo guulo ka kala sheegtay dagalaada Muqdisho.
Wasiirka Wasaarada Warfaafinta dowlada KMG ah ee Soomaaliya C/kariin Xasan Jaamac ayaa kulan saxaafadeed oo uu maanta ku qabtay xafiiska Warfaafinta ee magaalada Muqdisho waxa uu ku sheegay in dagaalada labadii maalin ee ugu dambeeyay ka dhacayay magaalada Muqdisho ay ka gaareen ciidamada DKMG ah Guulo wax ku ool ah.
Waxaa uu sidoo kale wasiirku sheegay in ciidamada Militeriga qaranka ay wiiqeen awoodii xarakada Alshabaab ee magaalada Muqdisho, isagoo intaasi raaciyay in taa mid la mid ah laga sameeyay gobolada qaar ee dalka .
Wasiirka Warfaafinta ayaa isagoo faah faahinaya waxa uu intaasi raaciyay in Alshabaab dagaalada lala galay loogaga dilay niman horjoogayaal ah kuwa kalena loogaga dhaawacay.
Sidoo kale Afhayeenka Xarakada Alshabaab Sh Cali Maxamuud Raage Sh Cali dheere ayaa sheegay in ciidamada Xarakada Alshabaab ay iska difaaceen wax uu ku tilmaamay duulaanka gardarada ah ee ay ciidamada DKMG ah iyo kuwa Amisom ku soo qaadeen fariisimada Alshabaab ay ku leeyihiin suuqa Bakaaraha .
Waxaane uu hoosta ka xariiqay in mudo 5 bilood ah ay ka hortaagnaayeen ciidamada iyo DKMG ah suuqa Bakaaraha ayna ku celinayeen isgoysyada Sayidka iyo Wadada Maka Almukarama ee magaalada Muqidsho, balse uu damacooda ka dib 5bilood uu maanta urumoobay .
Sh Cali Dheere ayaa waxa uu ku tilmaamay dagaalada labadii maalin ee ugu dambeeyay ka dhacay Muqdisho kuwo xarigjiid ah islamarkaana marna dowlada la riixayay marna Alshabaab la riixayay, taasina ay muujineyso in ciidamada Alshabaab u babacdhigeen dagaaladaas guulana ay ka soo hoyeen, isagoona baaq u jeediyay ganacsatada Suuqa Bakaaraha kaas oo ku aadanaa in ay difaacdaan Hantidooda, dagaaladuna aysan aheyn kuwo ku saleysan qabiil oo ay yihiin kuwo ku saleysan Diin waasida uu hadalka u dhigaye Sh Cali dheere.
Dhinaca kale Madaxa Caafimadaadka Isbitalka Madiina Duniya Maxamed oo la hadashay qeybaha kala duwan ee saxaafada Muqdisho ayaa waxa ay faah faahin ka bixisay in 24tii saac ee la soo dhaafay la soo gaarsiiyay isbitalka dhaawacyo gaaraya ilaa 53 dhaawac islamarkaana 23 ka mid ah dhaawacyadaasi in la jiifiyay 27da ka kalena markii dawooyin la siiyay ay iska bexeen halka 3 ka mid ahna ay u geeriyoodeen dhaawacyada soo gaaray dhamaana dadkaasi ay yihiin dad rayid ah .
Duniyo ayaa sidookalena sheegtay in isbitdalka dawooyinkiisu iminka yihiin kuwo gabaabsi ah islamarkaana .
Sikastaba ha ahaatee xaalada Magaalada Muqdisho ayaa ah mid kacsan islamarkaana waxaa la maqli karaa hugunka rasaasta oo ay labada dhinac isku adeegsanayaan iyagoona ciidamada DKMG ah la sheegay in ay gudaha ugu jiraan suuqa Bakaaraha fariisimona ka sameysteen.